गगन थापाद्वारा खुलामञ्चमा बहसमा आउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती – News Nepali Dainik
गगन थापाद्वारा खुलामञ्चमा बहसमा आउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती
प्रकाशित मिति: शनिबार, पौष २५, २०७७ समय: १९:१८:३७
थापाले नेकपाको प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका नेताहरुको पनि चर्को आलोचना गरे । आफूले ओलीलाई विश्राम दिनुपर्छ भन्दा नसुनेको स्मरण गराए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महारानीको शैलीमा प्रस्तुत हुँदा जाँदा प्रश्न उठाएको समेत स्मरण गराए । उनले भने, ‘मैंले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका क्रियाकलापलाई लिएर श्री ६ बडामहारानी भन्दा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? संसदमा उपसभामुख छैन भन्दा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय अंकगणित प्रयोग नगरौं भन्दा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? तपाईको बा लाई विश्राम दिनुहोस् भन्दा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?’
Last Updated on: January 9th, 2021 at 7:18 pm